ब्यक्तिको अर्डर होइन विधीको शाषन चाहीयो | KhelkudNews.com
ब्यक्तिको अर्डर होइन विधीको शाषन चाहीयो
Published on October 11, 2017, by Manoj Shiama - Posted in Slideshow, Taekwondo 0
नेपाल तेक्वान्दो संघको चुनाबी साधारण सभा आगामी शनीबार तय भएको छ । यसै महाधीबेशनमा महासचिवको उम्मेदवारी घोषणा गरे पछि बरिष्ठ तेक्वान्दो प्रशिक्षक अर्जुन बिक अहिले चर्चाको शिखरमा छन् । तीनै अर्जुनसंग गरिएको कुराकानीको सार संक्षेप
तपाइको उम्मेदवारी केको लागि हो ?
मैले बिधीको शाषनको लागि उम्मेदवारी दिएको हु । तेक्वान्दोको विगतको साख गीर्दै गएको छ । विधीको शाषन नभएरनै यो दुराबस्था आएको हो । तेक्वान्दोलाई विधीसम्मत डोह¥याउदै पुरानो साख फीर्ता गर्न नेपालमा भएकोक आठौ साग खेलकुदको जस्तो सफलताका दिन फर्काउनका उम्मेदवारी दिएको हु ।
अन्य प्रतिनिधीको प्रतिक्रिया के पाउनु भएको छ ?
२२ गते उम्मेदवारी मनोनयन गरे पछि मैले सबै प्रतिनिधीको नामावली मागे । तेक्वान्दोका कार्यकारी अधीकृत रामशरण अधीकारीले नदिनु भन्ने आदेश छ दिन मिल्दैन भन्नु भयो । तर पनि मैले फेसबुक स्ट्यासटस मार्फत मेरो उम्मेदवारीको जानकारी गराए । यस पछि देशभरीका तेक्वान्दोका साथीहरुबाट राम्रो प्रतिक्रिया पाइरहेको छु ।
मतदाता नामावली प्रकासित नभइ कसरी उम्मेदवारी मनोनयन भयो त ?
त्यही म भन्दैछु । विधीको शाषन चाहीयो भनेर । नेपाली तेक्वान्दो ४० साल देखि ७४ सम्म यसैगरी चलाएर डामाडोल गरियो । अब तेक्वान्दोमा विधीको शाषन आबस्यक छ भनेर मैले उम्मेदवारी घोषणा गरेको हु । यस्ता धेरै नसुहाउदा कुरा तेक्वान्दोमा भए ।
नेतृत्वले त तपाइहरु बरिष्ठ प्रशिक्षकलाई समेत सधै बे वास्ता ग¥यो भन्ने आरोप छ । साचो हो?
सबैलाई थाहा छ , तेक्वान्दो एउटा ब्यक्तिको अर्डरमा चल्छ । विद्रोहका आवाजलाई दबाइयो । २८ गते निर्वाचन छ । २७ गते काठमाडौ जिल्लाको अधीबेशषन हुदैछ । यस्ता मनपरितन्त्रले कहा पु¥याउछ भन्ने हो । मैले बारम्बार भन्ने गरेको छु, । सामुहीक भावना अनुसार तेक्वान्दो खेललाई अघि बढाउन र निती नियम अनुसार नै चलाउनकै उम्म्ेदवारी दिएको हु । कुनै सस्था कुनै ब्यक्तिको अर्डरको भरमा चल्नु हुदैन भन्ने हो ।
अन्तराष्ट्रिय तेक्वान्दोमा नेपाललाई स्वर्ण
राष्ट्रिय तेक्वान्दो टोली थाइल्याण्ड तर्फ